बिराट कोहलीका शरीरमा छन् ९ ट्याटु, प्रत्येकको अर्थ के? - Everest Dainik - News from Nepal
बिराट कोहलीका शरीरमा छन् ९ ट्याटु, प्रत्येकको अर्थ के?
काठमाडौंः भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान बिराट कोहली संसारका उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडीमा गनिन्छन् ।
खेलका लागि मात्रै नभएर लवाई खवाई र व्यवहारका कारण पनि उनी बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छन् ।
आज बिराट कोहली ३० औं जन्मदिन मनाइरहेका छन् । यो अवसरमा उनका बारेमा केही रोचक कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
निकै कडा परिश्रम गर्न रुचाउने बिराट कोहलीलाई ट्याटुको पनि शौक छ । उनले आफ्नो शरीरका बिभिन्न स्थानमा ९ वटा ट्याटु बनाएका छन् ।
तर यी सबै ट्याटुहरु बेअर्थी भने छैनन् । हरेक ट्याटुको बेग्लाबेग्लै अर्थ रहेको छ ।
१. बा–आमाको नाम
बिराटकी आमाको नाम सरोज हो भने बुवाको नाम प्रेम कोहली । १८ वर्षको उमेरमा उनका बुवाको निधन भयो । त्यसको अर्को दिन नै उनले रणजीमा कर्नाटकविरुद्ध ९० रनको पारी खेले । बिराटले प्रायजसो आफ्नो आमासँग लिएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गर्दछन् ।
एउटा बिज्ञापनका लागि उनले आफ्नो टिशर्टका पछाडी आमाको नाम लेखाएका थिए । आमाबुवासँगको यही प्रेमले उनलाई ट्याटुमा समेत उनीहरुको नाम राख्न बाध्य बनायो । उनको एउटा ट्याटुमा बुवाआमाको नाम देखिन्छ ।
हिन्दु धर्मका भगवान शिव अरु भगवान भन्दा अलि फरक मानिन्छन् । धार्मिक कथाहरुमा कैलाश निवासी शिवजीले शरीरमा खरानी घस्ने उल्लेख छ । पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दा उनले कालकूट विष सेवन गरेर सिंगो मानव र देव प्रजातीलाई जोगाएको कथा छ । बिराट कोहलीका लागि शिवजी प्रिय भगवान हुन । त्यसैले उनले शिवजीको तस्वीर नै ट्याटुमा कुँदेका छन् ।
कोहलीले धार्मिक स्थान मठको पनि ट्याटु खोपेका छन् । ट्याटु विशेषज्ञहरुका अनुसार, मठको ट्याटुले व्यक्तिलाई शान्त र केन्द्रीत बन्न मद्दत गर्दछ ।
४. टोपी नम्बर
सन् २००८ मा कोहलीले श्रीलंकाविरुद्ध आफ्नो एकदिवसीय खेलमा डेब्यू गरेका थिए । त्यतिखेर उनी भारतका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय वान डे खेल्ने १७५ औं क्रिकेटर बनेका थिए । २०११ मा उनले वेष्ट इण्डिजविरुद्ध टेष्ट डेब्यू गरे ।
उनी भारतका तर्फबाट टेष्ट खेल्ने २६९ औ क्रिकेटर बने । कोहलीले यी दुबै नम्बर पनि ट्याटु बनाए । कोहलीका लागि यी दुबै नम्बरको विशेष महत्व छ किनभने क्रिकेटको इतिहासको पानामा यी दुबै नम्बरले उनको कथा भन्ने गर्दछन् ।
कतिपयले यो कोहलीको पहिलो ट्याटु भएको पनि बताएका छन् । यो आकृतिले एउटा आक्रामक मानिसको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । कोहलीको व्यवहार हेर्दा यो ट्याटु किन बनाए होलान भनेर भन्नैपर्दैन ।
६. वृश्चिक राशीको नाम
कोहलीको जन्म ५ नोभेम्बरका दिन रहेको छ । त्यो हिसाबले उनी वृश्चिक राशी हुन । राशीका जानकार अनुसार वृश्चिक राशीमा जन्मिएका मानिसहरु दृढ, हठी र जिद्दि स्वभावका हुन्छन् । उनीहरुले जीवनका सबै कठिनाईको बहादुरी र हिम्मतका साथ सामना गर्दछन् ।
याे पनि पढ्नुस आइसीसीद्वारा बिराट कोहलीमाथि कारबाही
७. जापानी समुराई
जापानमा मध्य र आधुनिक कालमा सैनिककारुपमा सेवा दिनेलाई समुराई भनिन्थ्यो । बिराटले पनि आफ्ना कैयन बानी समुराईसँग मेल खाने ठान्छन् । बुशिडो कोडमा विश्वास राख्ने विराटले न्याय, साहस, भलाई, शीलता, इमान्दारी, सम्मान र वफादारीका समुराई बुशिडो कोडलाई आफ्नो आदर्श मान्छन् ।
८. भगवानको आँखा
तपाई जहाँ भएपनि, जे गरेपनि, जति लुकेर गरेपनि भगवानको आँखाले तपाईलाई देखिरहेको हुन्छ भन्ने मान्यता कोहलीले राख्छन् । त्यसैले उनले भगवानको यो आँखा आफ्नो शरीरमा ट्याटु बनाएको बताइन्छ ।
हिन्दू धर्ममा ओमको विशेष स्थान रहेको छ । यसबाटै अन्य सबै कुराको उत्पत्ती भएको मानिन्छ । कोहलीका अनुसार, यो ट्याटुले ब्रम्हाण्डमा मानिसको हैसियत धूलोको एउटा कणमात्र भएको अनुभूति गराउँछ । मानिसले आफूलाई प्रकृति या संसारभन्दा ठूलो सोच्न नहुने कुरा यो ट्याटुले बताइरहन्छ ।
ट्याग्स: ३० औं जन्मदिन, ट्याटु, बिराट कोहली
धरान उपमहानगरको मत गणना रोकियो
युरोपमै पहिलोपटक स्पेनले प्रस्ताव गर्‍यो महिनावारी हुँदा तलबी बिदा दिने कानुन